Ogaden News Agency (ONA) – Guddiga Fulinta ee Ururka Haweenka Ogadenya oo ka Shiray Dhamaystirka Qaabka Ururka (Bayaanka UHO)
Guddiga Fulinta ee Ururka Haweenka Ogadenya oo ka Shiray Dhamaystirka Qaabka Ururka (Bayaanka UHO)
Posted by ONA Admin	/ February 16, 2015
Maanta oo ay taariikhdu tahay 15/02/2015 waxaa khadka isgaadhsiinta kulan ku yeeshay gudiga Fulinta ee Ururka Haweenka Ogaadeenya (UHO), shirka oo ay ka soo qayb galeen dhamaan xubnaha maamulka Sare UHO waxaa gudoominaysay Gudoomiyaha guud ee UHO Marwo Rooda Ibraahim Cabdi (Afjano).
Waxaa shirka lagu furay Ayaado qur’aan ah kadib waxaa la gudo galay warbixino guud oo lagu uruurinayay xogaha laamaha UHO ee caalmka waxana la dhagaystay warbixino ay soo jeediyeen Hogaanada oo ku kala sugan Qaaradaha caalamka, waxaa sifiican looga dooday qaabka ugu haboon ee loo hirgalin karo dhamaystirka iyo dhaqaajinta hawlaha UHO iyadoo ay ururka u qorshaysantahay in la balaadhiyo maamulkisa lana dhamaystiro gudiyo hoosaadyada si dhab ah ayaana kulankan loogu hawl qaybsaday.
Ururka Haweenka Ogadenya oo la dhisay dhamaadkii bishii December ee sanadkii tagay ayaa qaaday talaabo xoogan oo laga dheehan karay warbixinada masuuliyiintu jeediyeen iyo xogaha ay ka soo gudbiyeen wadamada iyo qaaradaha ay ku sugan yihiin, ugu danbayntii Maamulka UHO wuxuu bogaadin u diray dhamaan Haweenka Ogaadeenya Dibada iyo gudahaba wuxuuna ugu baaqay in la mideeyo maskaxda, maalk iyo muruqa Haweenka Ogaadeenya meel ay joogaanba.
Shirka Maamulka Sare ee UHO oo si hufan loo soo agaasimay waxaa lagu qaatay go’aano dhaxal gal ah oo hawlaha lagu geedi galin doono, dhanka kale shirka waxaa ka soo baxay baaq iyo cambaarayn ku wajahan xadgudubyada iyo dibindaabyada shacabka Ogaadeenya sida joogtada ah ugu socda.
Shirka oo jawi aad uwanaagsan lahaa si baaxda lehna qodobadii lagaga hadlayay lagaga bogtay ayaa guul iyo farxad ku soo gabagaboobay. Waxaana kasoo baxay Bayaankan Hoose;
Madaxa Warfaafinta iyo xidhiidhka Caalamiga ah ee UHO